SPAM yeZuva | Martech Zone
Chishanu, February 23, 2007 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Kunyangwe neese mafaera eSAMP munyika, ini ndichiri kuwana SPAM. Ndinovenga SPAM, asi ndinofanira kubvuma imwe yemafaro angu ane mhosva apo ini ndichiongorora kuburikidza neSIPAM, ndinowanzoverenga zvimwe. Ini ndinokasira kuvatarisisa kuti ndiedze kuziva zvinhu zvakabatwa nefirita zvaive zvechokwadi mazwi. Nguva imwe neimwe mune imwe nguva, zvakadaro, ini ndinotarisa pane diki diki.
Heino wandinofarira Wemaonero Spam nhasi:
Mhoro. Kurumbidza kwangu kune webhusaiti yakanaka kwazvo. Ndine nguva yakanaka pane yako yekuona yako yakanaka katsi. Mazhinji ekubudirira mukuberekesa.
Nei ndiri paBlogBurst?
Uchishandisa Technorati's API uye PHP
Kukadzi 23, 2007 na8: 06 PM
Kutya .. Kugumburwa kwakakunda! Usambofa wakarerutsa simba reana mana ane makumbo.
Btw, ndatenda nekushanya neako "akanaka katsi!"
Kukadzi 23, 2007 na8: 11 PM
Uri kuberekesawo katsi! Murume iwe unoshamisa. Unorara rini? 😉
Kukadzi 23, 2007 na8: 28 PM
Hehe. Kana paine chero munhu ari kushamisika nezve Stumpy… chiri chirevo kune zefrank's ichangoburwa nyaya yekurara.
Zefrank imwe yemafaro angu ane mhosva.
Kuchengeta kugovana matipi ako ekuberekesa?
Saka iwe unoitei? Isa 'em mune imwe kamuri, kiya iyo kumusoro, dzoka kupera kwezuva uye bam, 10 madiki madiki kittens akatarisa kumusoro kumusoro kune ya? 🙂
Feb 24, 2007 at 8:57 PM
Zvakanyanya kuseka. Ini chaizvo ndine Jack Russell asingatenderi chero imwe mhuka mhenyu mumba medu. Munhu wake wekutanga akabatwa yaive shiri yedu, Ozzy. Akazotevera kubatwa aive Gerbil mwanakomana wangu akatengerwa mwanasikana wangu. Ndiye muvhimi ... murwere uye psychotic. Tichiri kumuda, zvakadaro.
Feb 26, 2007 at 9:04 PM
Mimwe mhinduro yeSSPAM inogona kuseka. Wakamboedza here kushandisa imwe yemasvomhu ekutaura spam ekuchengetedza plugins? Ndakavawana vachishanda kwazvo pakuvhara SPAM.
Masvomhu Kutaurisa Spam Plugin.